पास्टरले सात दिनपछि जिउँदो हुने भनेपछि पाँच दिनसम्म घरमै लास राखियो बुधवार, श्रावण २१, २०७७
जब एक युवती विरोधका लागि निर्वस्त्र सडकमा उत्रिइन् ! बुधवार, श्रावण ७, २०७७
ब्राजिल सरकारले भन्यो-बिहेअघि यौनसम्पर्क नगर्नु ! सोमवार, माघ १३, २०७६
यी सुन्दर महिला, ६ पति, ३ बच्चा, आइन्स्टाइनजस्तो दिमाग ती महिला संसारकै सुन्दर महिला मात्रै थिइनन्, आफ्नो समयकी सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री र अहिलेसम्मकी सुन्दर आविष्कारक पनि हुन् । शनिवार, माघ ११, २०७६
दुलाहा-दुलहीले लगाइदिए प्याजकाे माला, 'गिफ्ट' पनि प्याज नै एक वैवाहिक समाराेहमा दुलाहा दुलहीले एकअर्कालाई प्याज र लसुनकाे माला लगाइ दिएका छन्। शनिवार, मंसिर २८, २०७६
विवाहमा साढे दुई किलो प्याज उपहार ! एक जोडीलाई विवाहको उपहारस्वरुप प्याज दिइएको छ । बिहिवार, मंसिर २६, २०७६
७० करोड वर्ष अगाडि सर्पका खुट्टा थिए सर्पका जीवाश्मको नयाँ अध्ययनबाट सर्पहरुको खुट्टा भएको पत्ता लागेको हो। सोमवार, मंसिर ९, २०७६
श्रीमतीका पूर्वप्रेमीसँग बिहे गराईदिन राजी भए श्रीमान् ! भारतको मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालमा एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले श्रीमतीलाई प्रेमीसँग विवाह गराइदिनका लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमवार, मंसिर ९, २०७६
यी युवतीले कमाउँछिन् घण्टाको १२ लाख ! एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता यस्तै छ । आइतवार, मंसिर ८, २०७६
सुँगुरको रगतले नदी नै रातो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमा नजिकै रहेको नदी इमजिन रगतले राताम्य भएको छ । बुधवार, कार्तिक २७, २०७६
विश्वकै पहिलो उड्ने ट्याक्सी ! आउने वर्षहरूमा उड्ने ट्याक्सी यथार्थ हुने अपेक्षा बढ्दै गएको छ। लिलियमजस्ता कम्पनीहरूले परीक्षण गरिरहेका छन्। यस्ता ट्याक्सीहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र सरकारी अधिकारीको समर्थन लिनेबारे छलफल सुरू गरेका छन्। शुक्रवार, कार्तिक २२, २०७६
लडाकू प्रजाति चिम्पान्जीका केही आश्चर्य चिम्पान्जीलाई मानव जातिको पूर्खा मानिन्छ । मानिससँग सबैभन्दा बढी समानता र मेल भएको जनावर चिम्पान्जी हो । यसमा मानवजन्य केही बढी गुणहरु रहने र व्यवहार पनि सोही खालको देखाउने गर्दछ । मानिस आफ्नै प्रजातिमाथि बढी इष्र्यालु र शासक रहन चाहन्छ । तर मानिसमा हुने उच्च चेतनाका कारण मानव समाजमा ठूलाठूला बिद्रोहहरु हुने गरेका छन् । मंगलवार, आश्विन २८, २०७६